Senior Accountant Archives - Glory Assumption Space
Senior Accountant - Female - ( 8 ) Posts /လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
1. Senior Accountant - Female - ( 8 ) Posts /လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ -BCom or LCCI Level(3) -Accountant နှင့် Senior Accountant Level ဖြင့် အနည်းဆုံး (1)နှစ် အထက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -Microsoft word နှင့် excel သုံးတတ်ရမည်။ -စာရင်းတိကျစွာလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်ရက်ရှိသည်။ -အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမညါ။ -လစာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော စိန်ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြ ပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Accountant – Female - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Senior Accountant – Female - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • စာချုပ် ( ၂ ) နှစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • Senior Accountant ရာထူးဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည်။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ် မှ ( ၄၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • ACCA ( or ) CPA ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ • AP/AR /Casflow Costing များကိုသေချာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Quickbook Software ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ရှိသော Lighting Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_7890" align="alignnone" width="1920"] Young female economist or accountant sitting by desk in office and looking through financial documents[/caption]
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။ • Senior Account ရာထူးဖြင့်အတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • BCom ( သို့မဟုတ် ) မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆိုလျှောက်ထားနိုင်သည် ။ • ACCA ပြီးထားသူဦးစားပေးမည် ။ • Accounting Software အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Advanced Excel ရရမည် ။ • Trading ( သို့ ) Distribution ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်မှ ( ၃၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ Fashion Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ Fashion Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_6808" align="alignnone" width="509"] Beautiful businesswoman sit at workplace in office[/caption]
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
၁ ) Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက် ရှိရမည်။ - LCCI Level (III) ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက်(၃၇)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - Computer(Word,Excel) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အခွန်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန်မနက် ၇:၃၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၃၀ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ - စနေနေ့တစ်ဝက်၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော စက်ရုံသုံးစက်ပစ္စည်း Trading ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော စက်ရုံသုံးစက်ပစ္စည်း Trading ကုမ္ပဏီတွင အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ၂၇ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၄ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • နှစ်ချုပ်၊လချုပ်ဆွဲနိုင်ရမည်။ • စက်ရုံတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • စနေနေ့တ၀က်၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) တွင်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ • မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော သစ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံကြီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော သစ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁)Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • Bcom/DA/Becon/B.A (Eco) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (3) UK ​အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • MYOB (or) Accounting Software လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်နှင့် ( ၃၅ ) ကြားဖြစ်ရမည်။ • အရှုံး၊အမြတ် စာရင်းဆွဲနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောသေင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဆေးရုံးသုံးပစ္စည်းများဖြန့်ချီသည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀( ညှိနှိုင်း )
၁) Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀( ညှိနှိုင်း ) / သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ။ • Construction ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Bcom ဘွဲ့ရ ( သို့မဟုတ် ) CPA တက်နေသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၅ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သုဝဏ္ဏမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2818" align="alignnone" width="636"] Asian female accountant or banker making calculations. Savings, finances and economy concept throughalaptop.; Shutterstock ID 560877814[/caption]
၁) Senior Accountant – Female – (7) Posts - လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
၁) Senior Accountant – Female – (7) Posts - လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ဟိုတယ်မှ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ) (4Stars Hotel ) • Hotel လုပ်ငန်းတွင် Senior Account လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ် အထက် ရှိရမည် ။ • LCCI Level I , II , III ပြီးရမည် ။ • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • ဖယ်ရီ မရှိပါ ။ • Lunch Provide . • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၆ ) နာရီအထိ ။ • တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ၀င်ရမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • ဟိုတယ်ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ လေြာကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
1. Senior Accountant – Female (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /လှိုင်မြို့ နယ်။
တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Senior Accountant – Female (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /လှိုင်မြို့ နယ်။ - Senior Accountant လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - Manufacturing Costing ပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level (III) ပြီးရမည်။ - Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည်။ - B Com (သို့ ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရ ဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:30PM), တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - လှိုင်မြို့ နယ်ရှိ FMCG Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့ နယ်ရှိ FMCG Manufacturing Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09 262223785, 09 262223784, 09-263121101 Viber Phone Number –09262223784 , 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Accountant – Female (5)Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Engineering Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Senior Accountant – Female (5)Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ရန်ကင်းမြို့နယ်။
- BCom (or)CPA ပြီးထားသူဦးစားပေးမည်။ - LCCI Level3အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၂ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် - Accounting Software တစ်ခုခုအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်
Senior Accountant –Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောConstruction Companyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Senior Accountant –Female (5) Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်။
- B.com ဘွဲ့ရ(သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Word, Excel ရရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level (III) Certificate ရှိရမည်။ - Peachtree Softwareအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Senior Account ပိုင်း နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Accountant – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Senior Accountant – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/တာမွေမြို့နယ်။ - B.Com., ACCA Part (1) , LCCI Level3ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျုတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - တောင်ဒဂုံဆိပ်ကမ်းတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Senior Accountant – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/တာမွေမြို့နယ်။ - B.Com., ACCA Part (1) , LCCI Level3ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅)နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျုတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Accountant – Male/Female – (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Senior Accountant – Male/Female – (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး Accounts နှင့်ပက်သတ်သော Certificate ရရှိထားရမည်။ - Senior Accountant ရာထူးဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ် ရှိပြီး LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Microsoft Office, Excel, Internet and email, Accounting Software အသုံးပြုနိုင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Accountant– Female (5)Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Senior Accountant– Female (5)Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
- Must be University Graduate – DA , B Com , LCCI Level (III). - Must be Computer literate especially in Excel & Words. - Must be Female - Must be above4Years experience - Uniform - အလုပ်ချိန် (9:00 to 6:00) - စနေ နေ့ကို (၁) ပတ်ခြားတစ်ခါပိတ်သည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )